Ikhaya leholide elipholileyo eSavonranta
Indlu entle enemigangatho emibini enamagumbi amabini okulala kunye nethafa elikhulu elijikelezwe lihlathi lepayini elunxwemeni lwechibi elihle. Ulwandle lwabucala kunye ne-pier, i-15 yeemitha ukusuka kwindlu, isikhephe. Kukho indawo yomlilo kunye ne-sauna yombane. Kukho ilali ekwiikhilomitha ezimbini kude, apho kukho ivenkile, isikhululo segesi, ikhefi. Indawo enkulu ezolileyo yokuphumla, ukuloba nosapho kunye / okanye nabahlobo.
Indlu entle enemigangatho emibini enamagumbi amabini okulala, ithala elitofotofo elijikelezwe lihlathi lepayini kunxweme lwechibi elinomtsalane. Kukho ulwandle lwabucala olunepier, isikhephe. Indlu ineziko kunye nesauna yombane. Iikhilomitha ezimbini ukusuka kwindlu yaselalini
ivenkile, isikhululo segesi, ikhefi. Kubathandi bemisebenzi yangaphandle, iLecotti ski resort ikumgama oziikhilomitha ezintathu. Ehlotyeni, idolophu yeentambo ivuliwe apho. Kuya kuba luvuyo lwam ukuba uyonwabele iholide yakho, kwaye ufuna ukubuya kwakhona ukuze ufumane ulonwabo lokuzonwabisa, ukuloba kunye nokunxibelelana kunye nendalo emangalisayo kunye nosapho okanye abahlobo bakho.